Home Wararka Ciyaaraha Maxaa ku soo kordhay Heshiiska Manchester United ee la galeyso Borussia Dortmund...
Manchester United iyo Borussia Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay weli isku fahmin marka loo eego inay heshiis ka gaaraan qiimaha ciyaaryahanka reer England Jadon Sancho .
21 jirkaan ayaa la sheegay inuu durba heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda 20-ka jeer hanatay horyaalka Ingariiska heshiis shan sano ah oo uu ku sii joogayo Old Trafford.
Si kastaba ha noqotee, Man United ayaan weli heshiis rasmi ah la gaarin Dortmund, sida laga soo xigtay The Mirror , labada koox ayaan u dhawaan inay heshiis gaaraan marka ay timaado qiimaha.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in kooxda ka ciyaarta Bundesliga ay dooneyso 80m, laakiin Red Devils ayaa kaliya diyaar u ah inay bixiso £ 60m marxaladan lagu jiro hada ee dhaqaalo xumada la xiriirta.
Labada dhinac ayaa la sheegay inay u furan yihiin isu tanaasul, in kasta oo qaabka bixinta lacagta ay wali tahay mid dhibaato weyn ka jirto, iyadoo Man United ay la tahay inay dooneyso inay ku kala bixiso lacagtaas muddo shan sano ah.
Sancho, oo ay BVB ku qiimeysay £ 108m intii lagu jiray suuqii xagaaga ee la soo dhaafay, wuxuu dhaliyay 16 gool wuxuuna gacan ka geystay 20 caawin 38 kulan oo uu u saftay heerka kooxeed xilli ciyaareedkii hore.
Weeraryahanka ayaa laga soo xulay xulka England ee Euro 2020 laakiin ma uusan ciyaarin hal daqiiqo labadii kulan ee furitaanka tartanka ee ay la ciyaareen Croatia iyo Scotland.
Previous articleHarry Kane oo doonaya inuu kula midoobo Mauricio Pochettino kooxda Paris Saint-Germain.
Next articleChelsea oo kula biirtay Liverpool, Arsenal tartanka Alexander Isak’